UN: 25 kun ayaa ku biiray Daacish iyo Al-nusrah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Warbixin cusub oo ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada ka tegay dalalkooda ee ku biiray Khalaafada Islaamiga ee Ciraaq iyo Suuriya ay gaarayaan 25 kun oo ka kala tegay ilaa 100 dal oo aduunka ah.
Warbixintaan oo uu diyaariyey guddiga la socodka dhaqdhaqaaqa Alqaacidda ee Golaha Amaanka oo ay heshay wakaaladda wararka AP, ayaa lagu sheegay in tirada dagaalyahanada ajnabiga ee ku biiray Daacish ay kor u kacday 71% wixii u dhaxeeyey bartamaha sanadkii hore ee 2014 ilaa bishii tagtay ee Maasro 2015.
Guddiga soo saaray warbixintaan ayaa tilmaamay in mushkiladani ayba sii kordheysay 3-dii sano ee lasoo dhaafay, sidoo kalana qulqulka kooxaha jihaad doonka uu gaaray heer aan weli horay loo arkin.
Dagaalyahanada Islaamiyiinta ah ee ka dagaallama Suuriya iyo Ciraaq oo markii hore ahaa dhowr kun ayaa hadda gaaray in ka badan 25 kun, iyadoo 20 kun oo ka mid ah ay yihiin ajaanib socdaal ku galay labadaas dal, kuna kala biiray Daacish iyo Jabhadda Alnusrah.
Warbixintaan ayaa sheegtay in ajaanibta ka dagaallanta Afghanistan ay gaarayaan 6500 dagaalyahan, halka Soomaaliya ay joogaan ilaa 1000 dagaalyahana oo ajnabi ah, iyadoo boqolaal kale ku sugan yihiin Liibiya, Yemen iyo Pakistaan.
Dalalka Tunisia, Morocco, France, Russia ayaa warbixintu sheegtay iney ka tagaan inta badan dagaalyahanada ajnabiga ee ku biirya Jabhadaha Jihaadiga, iyadoo ay soo kordhayaan kooxaha ka imaanaya dalalka Maldives, Finland, Trinidad iyo Tabgo.
Warbixinta ayaa ka dhawaajisay in haddii Daacish lagu jebiyo Ciraaq iyo Suuriya ay taasi halis weyn tahay caalamka oo dhan, maadaama sida la yiri haraadigoodu ku kala laabanayaan dalalkii ay ka kala yimaadeen.
Guddiga warbixintaan soo saaray ayaa ku taliyey in lala yimaado siyaasado xakameeya mayal adeyga, loogana hortago in dhalinyarada jihaad doonka ah u safraan dalalka dagaaladu ka socdaan.